China Solid Frame Double Crank Mechanical Press (STE series) ifektri kanye nabaphakeli | UDaya
Main ukusebenza izici:
Ukuqina okuphezulu (ukusonteka) komzimba nesilayida 1/8000: ukusonteka okuncane nesikhathi sokugcina esinembile.
Sebenzisa i-pneumatic wet clutch brake (uhlobo oluhlanganisiwe): ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, umsindo ophansi, impilo ende yokusebenza.
Isilayida sisebenzisa umugqa womhlahlandlela wamakhona amane kanye nohlangothi lwamacala ayisishiyagalombili, ongathwala umthwalo omkhulu we-eccentric ukuqinisekisa ukugcinwa kwesikhathi eside nokuzinzile kokunemba kokushaya.
Isilayidi somhlahlandlela wesilayidi sisebenzisa "ukucisha ukuvama kakhulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi", ngokugqoka okuncane, ukucacisa okuphezulu, isikhathi sokugcina esinembile, nempilo yesikhunta ethuthukisiwe.
Sebenzisa insimbi yokusabalalisa uwoyela omncane ophoqelelwe: ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, nge-alamu ezenzakalelayo, kungakhuphula inani lokunyathela ngokulungisa ivolumu kawoyela.
I-crankshaft yenziwe ngezinto ezinamandla amakhulu ze-alloy 42CrMo, enamandla aphindwe ka-1.3 kunensimbi engama-45 futhi inempilo yenkonzo ende.
Umkhono wethusi wenziwe nge-tin-phosphorus bronze ZQSn10-1, amandla ayo aphindwe izikhathi eziyi-1.5 kunaleyo ejwayelekile ye-BC6 yethusi. Yamukela idivayisi ebucayi kakhulu yokuvikela ukugcwala ngokweqile, engavikela ngempumelelo impilo yesevisi yesibhakela bese ifa.
I-valve ejwayelekile yaseJapan ye-SMC elawula i-valve, i-lubricator, isihlungi somoya.
Amabheringi ejwayelekile aseJapan waseJapan NSK nezimpawu zaseJapan zeNOK.
Ukumiswa okujwayelekile kwesikrini sokuthinta i-Nokia Nokia kanye nemoto yakwa-Nokia.
Akuphoqelekile isikhunta isiguqo (air isiguqo).
Umshini we-DAYA oqondile oqondile ophindwe kabili nge-punch
Olunye uhlangothi oluqondile lucindezela imishini ephindwe kabili
Cindezela u-Daya: ngeplatifomu nangokuphepha kocingo, okulula ukugcinwa kwe-clutch kanye noshintsho lwamafutha okupholisa, ibhande lezimoto eliyinhloko likhululekile futhi lilula ukulilungisa, futhi lilungele ukugcinwa okulandelayo. Iphephe futhi ilula ngokwengeziwe.
Okunye ukucindezela:Ngaphandle kwesikhulumi sesondlo. Ukugcinwa kwe-Clutch, ukufaka uwoyela opholile, ukulungisa okuxekethile kwebhande lezimoto eliyinhloko, njll. Okungagcwaliswa kuphela ngosizo lwefoloko, okungakulungele ukulungiswa nokulungiswa okulandelayo. Kukhona ezinye izingozi zokuphepha ezingaba khona.
Cindezela u-Daya: Umshini weDaya usebenzisa amakhona amane nezinhlangothi eziyisishiyagalombili ukuzungeza ujantshi womhlahlandlela. Esimweni sokwakha isitampu, ujantshi wesilayidi somhlahlandlela ufakiwe yiyo yonke imizila yomhlahlandlela emzimbeni wetafula. Lolu hlobo lwesitimela somhlahlandlela lunezici zokunemba okuphezulu kokuqina, amandla we-anti eccentric umthwalo oqinile, ukugqoka kwesitimela okuncane nesikhathi sokugcina esinembile.
Okunye ukucindezela:ujantshi womhlahlandlela onesakhiwo esifakwe ngaphakathi njengokukhonjiswa kumuntu ofanele uyamukelwa. Ngesikhathi senqubo yokugxiviza, kunengxenye yesitimela esiqondisayo esidaluliwe. Ngesikhathi senqubo yokufaka isitampu, ujantshi wesilayidi wesilayidi kulula ukuwutshekisa, ngomthamo omubi we-anti bias load, ukugqokwa kukaloliwe omkhulu, isikhathi esifushane sokugcinwa ngokunemba kanye nezindleko zokulungisa eziphakeme.
Cindezela u-Daya: ibanga phakathi kwamaphoyinti amabili okusetshenziswa kwamandla lingaphezu kwama-60%; Izinzuzo: ibanga elikhudlwana phakathi kwamaphoyinti amabili okufaka amandla, kukhula amandla okuthwala amboze amandla; lapho kukhulu khona ibanga phakathi kwamaphoyinti amabili okufaka amandla, izindleko zokuklama ziyanda.
Okunye ukucindezela:ibanga phakathi kwamaphoyinti amabili ngokuvamile lingaphansi kwama-50%; Ububi: kuncane ibanga phakathi kwamaphoyinti okufaka amandla amabili, kuncane umthamo wokuthwala ome njengeqanda. Ujantshi womhlahlandlela kulula ukuwutshekisa, indlela yomhlahlandlela kulula ukuyigqoka, nokunemba komzila wesitimela akukuhle.
Cindezela u-Daya: uhlelo lokusakazwa kukawoyela oluncane, ukonga amandla, lungaphinde lusetshenziswe kabusha, ukusebenza kwe-fan ezishisayo kuhle, uma kuqhathaniswa ne-grease lubrication kungakhuphuka ngama-5-10 beats ngomzuzu.
Okunye ukucindezela: ipompo yamafutha kagesi, igrisi ayikwazi ukuphinda isetshenziswe, akukho nzuzo yokuphoqelelwa kohlelo lokusakazwa kukawoyela.
Cindezela u-Daya: lapho ubude besifo sohlangothi bufana, uhlelo lokuphoqelelwa kukawoyela olunciphayo lunokusebenza okuphezulu, uma kuqhathaniswa nokugcotshwa kwamafutha, kungakhuphula ukushaya okungu-5-10 ngomzuzu. Landela ngokuqinile izinga le-1 le-JIS laseJapan; izinga le-JIS le-1 laseJapan liphakeme kunezinga le-1 le-Taiwan CNS.
Okunye ukucindezela:ipompo yamafutha kagesi, igrisi ayikwazi ukuphinda isetshenziswe, azikho izinzuzo zohlelo lokusakazwa kukawoyela. ngokuya nge-Taiwan CNS level 1 standard
Umhlahlandlela wesilayidi we-Daya punch press
eminye imihlahlandlela yama-slide ye-punch
Umhlahlandlela wesitimela we-Daya punch press
Inqubo yokuqeda imvamisa ephezulu kakhulu: ubulukhuni ngaphezu kwe-hrc48;
Inqubo yokugaya ujantshi womhlahlandlela: ukuphela komhlaba kungafinyelela ku-ra0.4-ra0.8 (isibuko ebusweni), ukuthamba, ukufana kanye nokuba mpo ngaphakathi kwe-0.005mm / ㎡.
Ithuluzi lomshini linezinzuzo zokugqoka okuncane, ukucacisa okuphezulu, isikhathi sokugcinwa ngokunemba isikhathi eside, impilo ende yokusebenza kanye nokusetshenziswa kwamandla okuphansi.
Esinye isitimela somhlahlandlela wabezindabaayikho inqubo yokuqeda; ukucutshungulwa kokugaya, ukuqina kobuso ra1.6-ra3.2, ukuthamba, ukufana, ukugqama okungaphezu kuka-0.3mm / ㎡
UDaya cindezela i-crankshaft
amanye ama-crankshafts wokucindezela
I-Daya punch press: i-crankshaft yenziwe nge-alloy ephezulu ye-42CrMo Izinzuzo: amandla aphakeme izikhathi eziyi-1.3 kunaleyo yensimbi engu-45, impilo yensizakalo yinde, ukumelana nokugqoka kuhle, ukugqoka kuncane, nokunemba kugcinwa isikhathi eside.
Eminye imishini: yenziwe nge-45 yensimbi, Okubi: izindleko eziphansi, amandla nokuqina kokugqoka akufani ne-42CrMo
Indlela kawoyela ye-DAYA punch PRESS: Φ 8 isetshenziselwa ukufakwa kwepayipi lokucindezela uwoyela.
Izinzuzo: ipayipi elide, ububanzi obukhulu akulula ukuvimba, ukuphuka, ukuqinisekisa ukuphepha kwamafutha okugcoba, abushelelezi.
Eminye imishini: ipayipi lokucindezela uwoyela lokucindezela lisebenzisa Φ 6.
Langaphambilini I-Straight Side Servo Press (uchungechunge lwe-STP)
Olandelayo: Straight Side Mechanical Press (uchungechunge lwe-STF)
I-Straight Side High Speed ​​Press Yezimoto Stator ...